Home Somali News Saamaynta Barmaamij soo Bandhigay Hibooyinka Dadka Somaliland
Dhacdooyin si gaar ah u soo jiitay indhaha dadweynaha, ayaa ka soo baxay barnaamij loogu magac daray badhig-hibeedka dadka reer Somaliland oo laga bilaabay telefishanka Qaranka (SNLTV) bilowgii bishii Febreury ee sannadkan 2015.
Barnaamijka bandhig-hibeedka Somaliland (Somaliland got talent) oo loogu tallo-galay in dadku ku soo bandhigaan hibooyinka Alle qof walba gaar u siiyey ee ka qarsoon ummadda, waxa muddo kooban oo uu socday saamayn xooggan ku yeeshay dadweynaha iyo daawashada telefishanka Qaranka Somaliland-ba.
Barmaamijkan oo qorshuhu yahay inuu socdo muddo saddex bilood ah, kaas oo bilowgiiba lagu martiqaaday cid kastoo haysa ama leh hibo aanay la wadaagin dadka kale oo xiise badan, waxa markiiba iska diiwaan-geliyey in ka badan laba boqol qof iyo kooxo soo dalbaday inay ka qayb-galaan, balse guddi garsoor ka garnaqa oo loo xulay kala shaan-dhayn ay ku sameeyeen laga soo reebay tiro boqol iyo waxyar ah, kuwaas oo ku tartamaya muhibooyinka kala duwan ee leeyihiin.
Bandhig-hibeedka Somaliland oo saddex habeen oo kala ah; Jimcaha, Sabtida iyo Axadda toddobaad kasta, waxa laba iyo toban (12) qaybood ama barmaamij oo ilaa hadda uu baahiyey telefishanka Qaranku, waxa ka qayb-galay dad fara badan oo isugu jira rag iyo dumar intooda badani dhallinyarro tahay oo ka kala yimi guud ahaan gobollada dalka Somaliland oo dhan, kuwaas oo madasha la yimi xirfado iyo fikrado ku salaysan ficillo ay jidh ahaan u sameeyeen, suugaan ku salaysan hal-abuurnimo gabayo ama heeso ah iyo ciyaaro ka mid ah kuwa hiddaha iyo dhaqanka.
Waxa jira nin biro isku wada xidhan oo aan meel bannaan lahayn oo aad arkayso inay wada xadiid ah oo haddanna uu si fudud u wada kala saarayo. Nin kale ayaa garanaya lambarro qarsoon, tusaale ahaan, 18 furarka caagadaha biyaha ah oo uu mid walba siiyo lambar u gaar ah oo inta la isku walaaqo ama wada daro odhanaya mid ka mid ah ka taabta, kadibna garanaya oo sheegaya lambarkii furkaasi uu u sameeyey markii hore. Sidoo kale, nin baa jira codadka dadka koobiyeeya, waxa jira mid isagoo kelidii ah samaynaya majaajilooyin uu dadku ku qoslayo.” Sidaa waxa yidhi Cabdillaahi Aadan Cumar (Wayab) oo ah suxufi ruug-caddaa ah, kana mid ah shan xubnood Guddiga Garsoorka ee Barmaamijka Bandhig-hibeedka Somaliland ka kooban yihiin, kaas oo horena uga soo shaqeeyey arrimahan oo kale muddo dheer oo uu ku soo jiray saxaafadda dhexdeeda, waxaannu isagoo hadalkiisa sii wata intaa raaciyey, “Waxyaabaha xiisaha leh ee ka soo baxay barmaamijka waxa ka mid ah carruur aad u yaryar oo ciyaaraha dhaqanka si fiican u yaqaan sida laba gabdhood iyo laba wiil oo da’doodu kala 7 iyo 8 sanno jirro oo siday u boodayaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka la yaabay, waana arrin farxad leh oo dhiirigelin u ah da’yarta dalkeenna oo intooda badani aanay aqoon u lahayn arrimaha dadkeenna dhaqanka u ahaa.”
“Sidoo kale, marka tirada dadku sii yaraataba tartankuna wuu sii adkaan doonaa oo waxyaabo badan oo kale ayaa la eegi doonaa. Markaa kolay dad baa odhanaya anigu waan hagaagsanaa ee maxaa la ii reebay? Cabasho la waayi maayo oo gari laba nin kama wada qosliso, laakiin waxaannu ku dadaalaynaa in aannu ilaalino caddaaladda,” ayuu yidhi Cabdillaahi Geeljire.
Somaliland: Saylici oo hay’adda WFP kala wareegay Lix gaadhi oo ay hay’addu ugu deeqday Hay’adaha Dawladda